Sawirro+Magacyada Xubno Katirsan Alshabaab Oo Lacag Badan Lagu Baadi Goobayo.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay abaalmarin ahaan usiin doonta Sh16 million oo lacagta kenya ah qofkii soo sheega xogta ku aadan hogaamiyaha Alshabaab ee Kenya iyo todobo kale oo la socota.
Hogaamiyaha Al-Shabab ee dalka Kenya oo lagu magacaabo Ahmed Iman aka Abu Zinnra iyo todobada qof ee kala ayaa la rumaysan yahay in ay iskaga baxeen Al-shabaab,ka dib markii uu soo kala dhex galay is fahanwaa taasi oo la sheegay in ay u baqeen in la dilo.
Waxaa la sheegay in ninkaan iyo raga la socda ay hadda qorshanayaan in kooxo iyaga u gaar ah samaystaan isla markaana saldhig ka dhigtaan geymaha booni ee dalka Kenya.
Sidoo kale waxaa la sheegay in ujeedadada kooxdaan uu hogaaminaayo ninkaan Al-Shabaab u qaabilsanaa gudaha dalka Kenya ay tahay sidii ay saameyn xoogan ugu yeelan lahaayeen Kenya gaar ahaan goboladda Waqooyi bari iyo gobolka xeebta ee dalka Kenya.
Waxaa intaa lagu sii daray in ay timaaday ka bixitaanka Al-Shabaab hogaamiyahaan markii ay Alshabaab ay ku soo biireen dagaal yahano ka kala yimid dalalka Tansaaniya, Uganda, Masar iyo Liibiya.
Wargeyska The Star oo kasoo baxo dalka Kenya warbixin uusoo saaray ayuu waxa uu ku sheegay in ka bixitaanka hogaamiyahaan ay sii xumaynayso dagaalka udhaxeeyo dagaalyahanada ajaanibta ah iyo kuwa soomaalida ah ee ku jiro Al-Shabaab.
Ninkaan ay baadi goobayso dowladda Kenya ayaa la sheegay in ay la socdaan raga magacyadooda lagu kala sheegay Erick Achayo, Juma Ayub, Habib Karongo, Mohammed Musa, Mohammed Tajir, Ramadhan iyo Ramadhan Kioko.
Wargeyka waxa uu sheegayaa in hogaamiyaan Al-shabaab ay dili doonaan ama ay ku xukumi doonaan xabsi ka dib markii ay ku eeddeeyeen in uu basaas u yahay dowladda Kenya.
Hogaamiyaan ayaa la sheegay in uu Al-Shabaab sidoo kale uga shaqeenayay qeybta warbaahinta isagoona la sheegay in uu marar badan uu soo saaray muuqaalo ay Al-shabaab ka soo duubeen goobihii ay weerarada ay ku qaadeen ee gudaha soomaaliya.
Ahmed Iman hogaamiyahaan ay baadi goobaysa Kenya ayaa la sheegay in uu Soomaaliya yimid sanadkii 2009 tan iyo wixii waqtigaa ka dambeeyay waxa uu ka mid aha dagaalyahanada Al-Shabaab .
Xigasho: The Star Kenya
Soomaaliyeynta Cabdalla Cali Maxamed